0000 ကိုဗကျရဲ့နရောမှာ မျောရငျဟိုအစားဝငျမှာလား
November 4, 2019 kyaw kyaw Han Global News 0
ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စနနေကေ့ ဖရနျ့ဖတျကို ၅-၁ နဲ့ဆိုးရှားစှာရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျ နညျးပွ ကိုဗကျကို ရာထူးကနထေုတျပယျလို့ သူ့နရောမှာအစားဝငျဖို့အတှကျ မနျယူနညျးပွ မျောရငျဟိုက ဘှတျကီတှရေဲ့ဖေးဖရိတျအဖွဈဆုံးသော နညျးပွအဖွဈရပျတညျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ကိုဗကျဟာပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘိုငျယနျမွူးနဈကို ဘှနျဒကျဈလီဂါခနျြပီယံဘှဲ့ ရရှိစခေဲ့ပမေယျ့ ဒီရာသီမှာတော့ ရလဒျတှဆေိုးရှားမှုနဲ့ကွုံတှနေ့ရေပွီး ၁၀ ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ ၁၈ မှတျသာရကာ အဆငျ့ ၄ နရောကိုရောကျရှိနပေါတယျ။ ဖရနျ့ဖတျကို ၅-၁ နဲ့ရှုံးပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ သူထုတျပယျခံရတော့မယျလို့ ခနျ့မှနျးကွတဲ့အတိုငျး တကယျဖွဈလာခဲ့တာပါ။
ဘိုငျယနျဟာ လဈပျဇဈကိုအိမျကှငျးမှာ ၂-၁ နဲ့ရှုံးခဲ့သေးတဲ့အပွငျ မကွာသေးခငျကလညျး အဝေးကှငျးမှာအော့ဈဘတျနဲ့ ၂-၂ သရကေခြဲ့မှုတှဟော ကလပျတာဝနျရှိသူတှကေို စိတျပကျြစတေဲ့ ရလဒျတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ ဘိုငျယနျဟာ နညျးပွသဈရှာဖှနေလေို့ ဘှတျကီတှကေ မျောရငျဟိုကိုအလေးပေးမှုအမွငျ့ဆုံးအဖွဈသတျမှတျထားကွပါတယျ။ ကိုဗကျနရောမှာ ဂြူ ဗငျတပျနညျးပွဟောငျး အယျလီဂရီလညျးအစားဝငျမယျလို့ ရပေနျးစားနပေါတယျ။
လကျရှိဖှငျ့လှဈမှုအရာ မျောရငျဟိုက ၁၁-၄၊ ဂြာမနီအသငျးလကျထောကျနညျးပွဖွဈပွီး လကျရှိမှာ ဘိုငျယနျရဲ့ယာယီနညျးပွဖွဈနတေဲ့ ဟနျဆီဖလဈက ၁၀-၃၊ အဂေကျြနညျးပွ အဲရဈတနျဟတျက ၁၁-၂၊ အယျလီဂရီက ၉-၁ တို့နဲ့ရပေနျးစားနကွေပါတယျ။ ဘှတျကီတှကေ အခုလိုဖှငျ့လှဈထားပမေယျ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဟာ မျောရငျဟို ကိုအလိုရှိဖို့ မသခြောဘူးလို့ အခြို့တှကေသုံးသပျထားကွပါတယျ.
မျောရငျဟိုကိုယျတိုငျကလညျး ဘိုငျယနျနညျးပွရာထူးနဲ့ ပတျသကျလို့ မေးမွနျးမှုကိုအခုလိုဖွကွေားခဲ့ဘူးပါတယျ။ သူက”ကြှနျတေျာ့လုပျဖျော ကိုငျဘကျတှကေို လေးစားသလို ကိုဗကျကို ကြှနျတျောလေးစားပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဒီအမေးကိုကြှနျတျောမဖွနေိုငျပါဘူး။ ပွောနိုငျတာတဈခုကတော့ ဘိုငျယနျဟာ ထိပျတနျးအသငျးကွီးတဈခုဖွဈတယျဆိုတာပါဘဲ” လို့ ပွောသှားတာပါ။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ဖရန့်ဖတ်ကို ၅-၁ နဲ့ဆိုးရွားစွာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် နည်းပြ ကိုဗက်ကို ရာထူးကနေထုတ်ပယ်လို့ သူ့နေရာမှာအစားဝင်ဖို့အတွက် မန်ယူနည်းပြ မော်ရင်ဟိုက ဘွတ်ကီတွေရဲ့ဖေးဖရိတ်အဖြစ်ဆုံးသော နည်းပြအဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုဗက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ဘွန်ဒက်စ်လီဂါချန်ပီယံဘွဲ့ ရရှိစေခဲ့ပေမယ့် ဒီရာသီမှာတော့ ရလဒ်တွေဆိုးရွားမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး ၁၀ ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ၁၈ မှတ်သာရကာ အဆင့် ၄ နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဖရန့်ဖတ်ကို ၅-၁ နဲ့ရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူထုတ်ပယ်ခံရတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ဘိုင်ယန်ဟာ လစ်ပ်ဇစ်ကိုအိမ်ကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ရှုံးခဲ့သေးတဲ့အပြင် မကြာသေးခင်ကလည်း အဝေးကွင်းမှာအော့စ်ဘတ်နဲ့ ၂-၂ သရေကျခဲ့မှုတွေဟာ ကလပ်တာဝန်ရှိသူတွေကို စိတ်ပျက်စေတဲ့ ရလဒ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဘိုင်ယန်ဟာ နည်းပြသစ်ရှာဖွေနေလို့ ဘွတ်ကီတွေက မော်ရင်ဟိုကိုအလေးပေးမှုအမြင့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ကိုဗက်နေရာမှာ ဂျူ ဗင်တပ်နည်းပြဟောင်း အယ်လီဂရီလည်းအစားဝင်မယ်လို့ ရေပန်းစားနေပါတယ်။
လက်ရှိဖွင့်လှစ်မှုအရာ မော်ရင်ဟိုက ၁၁-၄၊ ဂျာမနီအသင်းလက်ထောက်နည်းပြဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ဘိုင်ယန်ရဲ့ယာယီနည်းပြဖြစ်နေတဲ့ ဟန်ဆီဖလစ်က ၁၀-၃၊ အေဂျက်နည်းပြ အဲရစ်တန်ဟတ်က ၁၁-၂၊ အယ်လီဂရီက ၉-၁ တို့နဲ့ရေပန်းစားနေကြပါတယ်။ ဘွတ်ကီတွေက အခုလိုဖွင့်လှစ်ထားပေမယ့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ မော်ရင်ဟို ကိုအလိုရှိဖို့ မသေချာဘူးလို့ အချို့တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်.
မော်ရင်ဟိုကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘိုင်ယန်နည်းပြရာထူးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ သူက”ကျွန်တော့်လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်တွေကို လေးစားသလို ကိုဗက်ကို ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီအမေးကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါဘူး။ ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ ဘိုင်ယန်ဟာ ထိပ်တန်းအသင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါဘဲ” လို့ ပြောသွားတာပါ။